Dowlad Hoose - Howling Pixel
Dowlad Hoose (Af-Ingiriis: municipality; Af-Carabi: بلدية) waa nidaamka qeyb ka mid ah dowlad meeli leedahay gaar ahaan deegaanada magaalooyinka iyo casimadaha. Dowlada hoose ee degmo, magaalo ama caasimad waa maamulka hoose ee deegaankaasi kaasi oo laga soo doorto isla deegaankaasi isla markaana la shaqeeya dowlada dhexe iyo dowlada sare.
Sida caadiga ah, dowlada hoose waxay ka kooban tahay tiro dad ah oo loo yaqaano "Golaha Deegaanka", saraakiil, xisaabiye, xoghaye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano Duqa magaalada.
Xafiis dowlad hoose.
Maabka xafiisyada Dowlada Hoose ee wadanka Slovenia.
Kani waa maqaal ku saabsan magaalada Baltimore, Maryland, Maraykanka. Baltimore (/ltɨˌmɔr/) waa magaalada ugu weyn gobolka Maryland ee wadanka Maraykanka, waa magaalada 26aad ee ugu shacabka badan leh, iyo caasimad ugu weyn ee madaxbanaan.
Caasimada Baltimore waxaa la aasaasay sanadkii 1729kii, waana dekada labaad ee ugu weyn gobolada xiga Badweynta Atlaantik. Sidoo kale dekeda magaalda Baltimore waxay waayo ahaan jirtey mida labaad ee ugu soo dejinta iyo dhoofinta badan wadanka Maraykanka, taasi ooy ku xidhnaayeen waxsoo saar faro badan.Ka dib markii ay soo waajahde dib udhac xaga wax soo saarka ah iyo wershadaha ayaa magaalada Baltimore waxay culeska saartey dhaqaalaha, caafimaadka iyo waxbarashada, kuwaasi oo maanta ah midhaha ugu wacan ee caasimadu ka hesho dhaqaalaha iyo lacagta. Waxaa magaaladan ku yaala cusbitaalo waaweyn oo tayo heersar ah leh, iyo machadyo caalami ah oo ku takhasusay kuliyado kala duwan oo waxbarashad iyo cilmibaadhista ah.
Magaalada Baltimore waxaa ku dhaqan dad gaadhaya ilaa 622,104 (tirokoob la sameeyay 2013kii), halka marka lagu daro nawaaxigeeda ama Baltimore metropolitan ay leedahay shacab bulsho dhan 2.7 milyan, taasi oo ka dhigaysa magaaldan mida 20aad ee ugu shacabka badan wadanka Maraykanka.Dadka caanka ah ee ku dhaqan Baltimore waxaa ka mid ah heesayaal badan oo qaada heesaha jazzka, rockyga iyo rapka. Sidoo kale waxaa degan magaaldan tiro atooreyaal iyo jilaa ah oo soo saara filimaan iyo music videos. Dadka la taaban karo waxaa ka mid ah ninkii sameeyay "Heesta Calanka Maraykanka" oo lagu magacaabo Fransis Skot Key.
Guud ahaan, ilaa rubuc bulshada magaalada Baltimore waa saynisyahano, injineero, xisaabyahano, teknoolijiyiin, macalimiin, khubaro, aqoonyano, profosseero iyo arday qalin-jebin rabta.
Taasi waxay cadayn u tahay sida bulshada Baltimore u daneeyso aqoonta iyo waxbarashada, heer sarena uga gaadheen.
Boga "Portland" waxaa laga soo toosiyay halkan.Bortland (ingiriis: Portland; carabi: بورتلاند) waa caasimad ku taala gobolka Oregon ee wadanka Maraykanka, iyo fadhiga dowlada Degmada Multnomah, taasi oo dhacda meel u dhow dooxada Webiga Willamette iyo Webiga Kolumbiyaa.
Sida lagu sheegay tirokoob dowlada dhexe Maraykanku samaysay horaantii sanadka 2010ka caasimada Bortland waxaa ku noolaa bulsho dhan 583,776, taasi oo tirokoob labaad lagu sheegay ineey noqdeen 619,360 sanadkii 2014.
Bortland waa caasimada 28aad ee ugu shacabka badan magaalooyinka wadanka Maraykanka. Qiyaas ahaan ilaa 2,348,247 oo dad ah ayaa ku dhaqan Bortland metropolitan waa sida lagu xusay tirokoob ay sameeysay dowlada deegaanku sanadkii 2014ka. Sidoo kale waxaa tirokoobta lagu ogaaday in Bortland iyo nawaaxigeedu noqonayaan deegaanka 24aad ee ugu shacabka badan wadanka, taasi oo gabi ahaan leh dad gaadhaya ilaa 3,022,178.
Caasimada Bortland waxaa la aasaasay sanadkii 1851kii meel u dhow dooxada Oregon Trail ee iskuxidha galbeedka iyo badhtamaha Maraykanka. Nidaamka maamulka dowlada caasimadu waa mid ah Gole Caasimad ka kooban shan qof kuwaasi oo hoostaga duqa-magaalada. Waxaa iyaguna jira golo dhexe oo la soo doorto afartii sano mar kuwaasi oo ka masuul ah deegaanka Bortland metropolitan.
Guud ahaan maamulka caasimada iyo nawaaxigeeda waxaa lagu amaanaa horumarka iyo qorshe wanaaga ay u dhiseen deegaanada Bortland iyo nawaaxigeeda. Caasimadani waxay ka mid tahay meelaha ugu cagaarsan wadanka Maraykanka, taasi oo in badan amaan loogu soo jeediyo.Juquraafi ahaan, caasimada Bortland waxay dhacdaa deegaanada dooxada Willamette ee gobolka Waqooyigalbeed Baasifig; meel u dhaxaysa Badweynta Baasifik iyo Buuraha Kaskade. Caasimadu waxay leedahay cimilo degan, diirimaad ah, qalalan wakhtiga gu'ga, qaboow dhexdhexaad ah wakhtiyada jiilaalka ah. Jawiga noocaas ah wuxuu u suurtogeliyay beerida Ubaxa ay caasimadu caanka ku tahay. Naaneysaha Bortland waxaa ka mid ah "Caasimada Ubaxa" taasi oo laga soo xigtay beeraha badan ee ubaxa ka baxa Bortland iyo agagaarkeeda.
Sidoo kale Caasimada Bortland waxay caan ku tahay xarakaadka dibada (outdoor activities) sida cabitaanka bunka, koofiga, sharaabka fudud, khamriga iyo noocyada kale ee la cabo.
Kani waa maqaal ku saabsan magaalada Jikaago, Illinois, wadanka Maraykanka. Bogaga Shikaago iyo Jikaago waxaa laga soo toosiyay halkan.Chicago, Shikaago, Jikaago (loogu dhawaaqo /kɑːɡoʊ/ ama /kɔːɡoʊ/) waa caasimada sadexaad ee ugu dadka badan wadanka Maraykanka. Magaalda Jikaago waa deegaanka ugu dadka badan gobolka Illinois iyo deegaanka "Midwest", taas oo leh shacab dhan 2.7 milyan.Dhinaca kale, marka la isku daro magaalada Chicago iyo nawaaxigeeda, taasi oo loo yaqaano "Chicagoland", waa deegaanka sadexaad ee ugu wayn wadanka Maraykanka, waxaana degan dad ka badan 10 milyan. Shikaago waxaa la aasaasay sanadkii 1837kii, laakiin waxay aad u kortay horaantii qarnigii 19aad. Horumarka iyo koritaanka magaalada waxaa aad uga qeyb qaatey harta Great Lake iyo webiga Mississipi. Shikaago waa fadhiga dowlada "Cook County" ee ugu weyn gobolka Illinois..Maanta magaalada Shikaago waa xarun weyn oo ganacsi, dhaqaale, warshado, shirkado, teknoolojiyad, isgaadhsiin, iyo gaadiid; waxayna leedahay Gegada diyaaradaha O'Hare ee caalamiga ah (" O'Hare International Airport") kaasi oo ah gegada diyaarada ugu weyn ee caalamka oo dhan. Sidoo kale, caasimada Shikaago waxaa ku yaala wadooyinka (highways) iyo wado-tareenka (railroads) ugu waaweyn wadanka Maraykanka. Sanadkiii 2014ka waxaa loo aqoonsaday magaaladan ineey tahay caasimada 14aad ee ugu weyn caalamka, tan 7aad ee ugu dhaqaalaha badan, iyo tan sadexaad ee ugu lacagta badan wadanka Maraykanka ayada oo heeysata ama maamusha lacag dhan 571 bilyan dollar.Intaas waxaa dheer in magaalada Shikaago tahay mid ka mida goobaha soo jiidasha badan ee wadanka Maraykanka; sanadkii 2014ka oo kali ah waxaa soo siyaartey magaaladan dad ka badan 50.2 milyan oo dad iskugu jira ajanabi iyo kuwa wadanka u dhashay. Sabata keentay dalxiisayaasha badan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo bulsho weynta magaalada oo ah mid aad iskugu dhafan oo leh noocyo badan oo matala dhaqanada dunida daafaheeda. Waxyaabaha ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah: shaneemooyinka waaweyn, heesaha Jazzka, Soulka iyo bluega. Waxaa sidoo kale magaadu caan ku tahay dadka Madoow (African American) ee ku dhaqan magaalada; kuwaasi oo ah tirada ugu badan shacabka Shikaago iyo nawaaxigeeda.Caasimada Shikaago waxay leedahay naaneyso badan ooy ka mid tahay "Caasimada Dabeysha" (sababtoo ah waxay leedahay dabeyl aad u badan oo gu' iyo jiilaal soo taagan), "Caasimada Labaad" iyo naaneyso kale oo la xidhidha dhaqanka iyo taariikhda deegaanka.
Eastliegh somali section
Eastleigh Somali Section
Hofors waa magaalo iyo xarunta Dowlad Hoose Hofors, ee Degmada Gävleborg, taasi oo ku taala wadanka Iswidhan. Magaaladan waxaa ku nool dad tiradoodu gaadhayso 6,681 sanadkii 2010.
Kani waa maqaal ku saabsan magaalada Howston, Tegsas, Maraykanka.Howston, Houston (/stən/ HYOO-stən) waa caasimada ugu bulshada badan gobolka Tegsas iyo Koonfurta Maraykanka. Intaasi waxaa dheer, caasimadani waa mida 4aad ee ugu shacabka badan guud ahaan wadanka Maraykanka, taasi oo leh dad dhan 2.239 milyan (sida lagu sheegay tirokoob ay dowlada dhexe Maraykanku sameeysay sanadkii 2014ka).Caasimada Howston waxay degan tahay dhul baaxadiisu dhan tahay 599.9 mayl labo-laaban (1,553 kilomitir labo-laaban). Sidoo kale waa caasimada ugu balaadhan ee ugu shacabka badan Deegaanada Koonfurta Maraykanka,Caasimada Howston waa fadhiga dowlada Degmada Harris ee koonfurbari gobolka Texas. Marka lagu daro nawaaxigeeda, Houston metropolitan waa mida 5aad ee ugu shacabka weyn wadanka Maraykanka.
Taariikh ahaan caasimada Howston waxaa la aasaasay sanadkii 1836dii dooxada deegaanda Buffalo Bayou waxaana caasimada leh dowlad-hoose laga dhigey Juun 5, 1837dii. Caasimada Howston waxaa loogu magac daray Jenaraal Sam Houston, kaasi oo madaxweyne ka ahaan jirey Jamhuuriyada Tegsas isla markaana ku guuleystay dagaalkii San Jakinto ee ka dhacay 25 kilomitir bariga meesha ay maanta tahay caasimada Howston.
Dekada dabiiciga ah, wado tareenka laga dhisey deegaanadaasi, wershadaha laga aasaasay dhulkaasi iyo helitaanka shidaalka sanadkii 1901, ayaa waxay qeyb libaaxle ka qaadatey koritaanka iyo balaadhashada caasimada Howston; taasi oo soo jiidatay bulsho-weynta ku soo ururtey deegaankaasi. Horaantii qarnigii labaatanaad waxay Howston noqotey hooyga xarunta caafimaadka gobolka Tegsas, goobta ugu weyn aduunka ee machadka cilmi-baadhista Sayniska iyo caafimaadka, saldhiga weyn ee hay'ada Cilmi Falaga ee NASA, iyo hooyga Mission Kontrol Senter.Dhaqaalaha caasimada Howston wuxuu ku salaysan yahay wax soo saarka wershadaha, awooda iyo tamarta, soo saarida alaabta, shirkadaha caafimaadka, iyo gaadiidka. Caasimadani waxay hooy u tahay shirkadaha ugu waaweyn ee caafimaadka, xarumaha shirkadaha waaweyn ee Fortune 500; waxaa magaaladani ka horeeya New York oo kali ah.
Intaasi waxaa dheer, Dekeda Howston waxay ku jirtaa kuwa ugu heerka sareeya dekedaha wadanka Maraykanka, waana dekad caalami ah oo la tacaasha adeega maraakiibta caalamiga ah.Guud ahaan, caasimada Howston waxaa lagu naaneysaa magacyo badan kuwaasi waxaa ka mid ah Caasimada Cirka ("Space City"), taasi oo ka turjumeysa duulimaadyada cirka ee ay ka fuliso hay'ada Cilmi Falaga ee NASA.
Sidoo kale, Howston waxaa lagu tiriyaa caasimad caalami ah marka la tixraaco awooda dhaqaale, ganacsiga, madadaalada, hidaha iyo dhaqanka, isgaarsiinta wararka, sayniska, ciyaaraha, feeshanka, teknoolojiyada, waxbarashada, daawooyinka iyo cilmibaadhista. Waxaa caasimadani hooy u tahay noocyo badan oo diimaha caalamka; iyo bulsho kale oo ka soo jeeda deegaano kala duwan oo aduunka ah. Waxaa lagu sheegaa in Howston tahay maagaalada ugu badan ee leh shacab kala duwan oo ka soo jeeda wadano kala duwan oo dunida ah.Marka laga yimaado xeebaha bilicda fiican iyo deegaanka cimilada wacan, caasimada Howston waxay soo jiidataa tiro badan oo dalxiisayaal ah sanad kasta kuwasi oo aad u daneeynaya goobaha hidaha iyo dhaqanka iyo meelaha taariikhiga ah.
Mayami, Miami (/æmi/; (Af-Isbaanish: maiˈami)) waa magaalo ku taala Badweynta Atlaantik ee xeebaha koonfurbari gobolka Florida wadanka Maraykanka. Magaalada Miami waa fadhiga dowlada degmada Mayami-Dale ee maamusha deegaano badan oo ka tirsan gobolka Foloriida. Marka la xisaabinayo dadka iyo shacabka, magaalada Mayaami waa mida 44aad ee ugu dadka badan wadanka Maraykanaka, waxayna leedahay shacab dhan 417,650 (tiro-koobtii 2013ka0.Marka lagu daro deegaanada nawaaxiga ee hoosyimaada dowlad hoose ee Mayaami Metropolitan waa mida 8aad ee ugu dadka badan liiska dalka Maraykanaka, taasi oo leh dad gaadhaya 5.5 milyan bulsho ah.
Mayaami waa xarun iyo hogaanka dhaqaalaha, ganacsiga, dhaqanka, madadaalada, farshaxanka, waxbarashada iyo ganacsiga caalamiga ah. Sanadkii 2012ka waxaa la isla afgartey in magaalada Miyaami tahay Caasimad Aduunka ah (Alpha World City). Xaga dhaqaalaha magaalada Miyaami waxaa lagu sheegay ineey tahay magaalada 7aad ee ugu dhaqaalaha badan magaalooyinka wadanka Maraykanka, sidoo kale waa magaalada 33aad ee caalamka.
Magaalada Mayaami waxay caan ku tahay xeebaha quruxda badan iyo cimilada kulul sanadka oo dhan, taasi oo noqotey mid aad u soo jiidata dalxiisayaasha wadanka dhexdiisa iyo dibadiisaba.
Magaalada Mayaami waxaa ku dhaqan dad aad u badan oo leh dhaqano kala duwan oo matala meelo badan oo dunida ah. Waxaanay magaaladani ku caan tahay madadaalada iyo dalxiiska.
Sidoo kale, Mayaami waxaa lagu magacaaba "Caasimada Latin Ameerika" sababtoo ah waxaa ku dhaqan tiro aad u badan oo dad ka soo jeeda wadanada Laatiin Ameerika, waxaana loo aqoonsan yahay magaalada labaad ee ugu badan dadka ku hadla Isbaanishka, sidoo kale waa magaalada ugu badan eey ku dhaqan yihiin dadka ka soo jeeda wadanka Kuuba.
Farasmagaalka magaalada Mayaami waxay xarun u tahay qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn wadankan Maraykanka; kuwaasi waxaa ka mid ah bankiyo caalami ah, xarumo cilmibaadhis, caafimaad, biotechnology, teknoolojiyad, goobo madaalo, iyo shirkadaha dalxiiska xeebaha iyo badaha
Muqdisho (Af-Taliyaani: Mogadiscio, Carabi: مقديشو, Xamar, Carabi: حَمَر) waa caasimada Jamhuuriyadda Fedraalka Soomaaliya, waxa ayna ku taalaa galbeedka Badweynta Hindiya, waa magaalo qurux badan oo indhuhu soo jiitaan, oo aay badweynta Hindiya kaga wareegsan tahay sadax jiho.
Kani waa maqaal ku saabsan magaalada Nashville, Tennessee, Maraykanka.Nashfille (ingiriis: Nashville; carabi: ناشفيل) waa magaalo-madaxda gobolka Tennessee iyo fadhiga dowlada Degmada Davidson ee wadanka Maraykanka.
Nashfille waa caasimada labaad ee ugu wayn gobolka Tennessee, waxaa ka weyn kaliya Caasimada Memfis, sidoo kale waa caasimada afaraad ee ugu weyn uguna bulshada badan deegaanada gobolka Koonfureed ee wadanka Maraykanka.
Caasimada Nashfile waxay dhacdaa dhinaca Webiga Kumberland ee badhtamaha waqooyiga gobolka Tennessee. Waxay magaaladani caan ku tahay heesaha, suugaanta, fanka, caafimaadka, bankiyada, daabacaada buugaagta, isgaadhsiinta gaadiidka, wax soo saarka wershadaha, waana hooyga dugsiyo aad u waaweyn iyo jaamacado aad looga qadariyo wadanka Maraykanka iyo caalamka.
Marka la eego meesha ay kaga taalo dowlada wadanka, Nashfille waa hooyga Maxkamada ugu sareeysa ee Tennessee iyo Maxkamada Guud ee wadanka. waxayna magaaladu caan ku tahay suugaanta, taasi oo lagu magacaabo "Warshada Suugaanta iyo Heesaha".
Boga "Oakland" iyo "Owkland" halka ayaa laga soo toosiyay.Owkland, Oakland /lənd/ waa magaalo iyo caasimad weyn oo ku taala Xeebta Galbeed ee Maraykanka, iyo caasimada dekada gobolka Kalifornia.
Dekeda Caasimada Owkland waa mida ugu mashquulka badan dekedaha Gacanka San Fransisko iyo dhamaan dekedaha Waqooyiga Kalifornia. Intaasi waxa dheer, caasimada Owkland waa magaalada ugu baaxada weyn Gacanka San Fransisko, waa caasimada sideedaad ee ugu shacabka badan gobolka Kaliforniya, iyo mida 45aad ee ugu bulshada badan wadanka Maraykanka, taasi oo leh dad dhan 413,775 qof (sida lagu sheegay tirokoob ay samaysay dowlada dhexe Maraykanka sanadkii 2014ka).
Caasimada Owkland waxaa dowlada hoose loo sameeyay sanadkii 1852, goortaasi oo lagu daray Degmada Alameda. Owkland waa xarun isku xidha socodka ganacsiga waana rugta wax iibsiga ee gobolkaasi. Waxaa sidoo kale ay Owkland tahay magaalada ugu xigta Gacanka San Fransisko xaga Badweynta Baasifikga, taasi waa sababta loogu bixiyey "Gacanka Bari".
Caasimadani waxay dhacdaa agagaarka gacankaasi, taasi oo u jirta kaliya lix mayl (9.7 km) caasimada San Fransisko.
Dhamaadkii sanadihii 1860kii ayaa Owkland loo doortay in deegaan shacab lagu beero laga dhigo, goortaasi oo la so mariyay wado tareenka Transkontinental oo aad uga caawisay koritaanka iyo camirida deegaanka. Waxay caasimadu aad u kortay horaantii qarnigii labaatanaad goortaasi oo laga sameeyay wershado wax soo saar iyo kuwo moorgareeya khudaarta iyo dhirta deegaanka ka baxdey. Sidoo kale waxaa wakhtiyadani aad u horumaray dhistaanka maraakiibta waaweyn ee loogu talo-galay ineey qaarad ilaa qaarad xamuul iyo alaab u qaadaan.
Iyadna waxaa xusid mudan, Dhulgariirkii San Fransisko ee sanadkii 1906dii inuu keenay in bulsho badan ka guurto magaaladaasi kuwaasi oo soo degay isla markaana camirey, aqalo cusub iyo meherado keenay caasimad Owkland.
Guud ahaan, Caasimada Owkland waxaa ku taala deked aad u mashquul badan oo shaqada ka socoto badan tahay. Dekeda Owkaland waa tan shanaad ee ugu shaqada badan wadanka Maraykanka.
Xaga cimilada caasimadu waa mid degan oo lagu sheego "Cimilada Miditereeniyaanka" sababtoo ah waxay caasimadu qorax aragtaa 260 maalmood sanad kasta.
Harta Merritt oo ku taala farasmagaalaha Owkland waa midii ugu horeeysay ee dowlada wadanka Maraykanku u qorsheeyeen in ay noqoto xero amaan nolosha xayawaanka duurjoogta ah. Meelaha ugu caansan magaalda waxaa ka mid ah biyoleeyda Owkland, oo ah mid ka mida meelaha soo jiida dalxiisayaasha yimaada magaalada.
Boga "Omaha" waxaa laga soo toosiyay halkan.Omaha (/əhɑː/ OH-mə-hah) waa caasimada ugu weyn gobolka Nebraska, wadanka Maraykanka. Sidoo kale caasimadani waa fadhiga dowlada Degmada Douglas, waxayna dhacdaa Gobolada Badhtamaha Galbeedka Maraykanka ee dhinaca ku haya Webiga Missouri iyo waqooyiga Webiga Blatte.
Caasimada Omaha waxay xuddun u tahay deegaanda balaadhan ee la isku yidhaahdo Omaha-Bluffs metropolitan, kaasi ooy soo hoosgalaan degmooyinka waqooyi ee gobolka Iowa.
Asal ahaan caasimada Omaha waxaa laga garab aasaasay agagaarka webiga Missouri taasi oo wakhtiyadii hore ahaa wado weyn oo safarka ganacsiga alaabta loo isticmaalo.
Horaantii magaalada Omaha waxay ahayd deegaan ku fiican beerashada iyo dhaqashada xoolaha, laakin waxay awood iyo bulsho badan yeelatay badhtamihii qarnigii 19aad goortaasi oo magaaladu noqotey xuddun isku xidha ganacsiga u kala gooshaya bari iyo galbeedka wadanka Maraykanka.
Maanta caasimada Omaha waa hooyga iyo xarunta sare ee shirkado waaweyn sida "Fortune 500", wershado soo saara cuntada (sida ConAgra Foods), wado tareenka ugu weyn wadanka, Shirkada Weyn ee Baasifiga, shirkado Caymis iyo dhaqaale (sida Omaha Mutual), qaar ka mid ah shikadaha dhismaha ugu weyn caalamka sida "Kiewit Corporation" iyo kuwo kale oo badan. Shikadaha kale ee caanka ah ee degan caasimada Omaha waxaa ka mid ah "Fortune 1000", Td Ameritrade, West Corporation, Wershadaha Valmont, Shirkada Awooda Green Plains, Warner Enterprise, First National Bank, Leo A Daly, HDR Inc, DLR Group iyo Ururka Gallup Poll.
Boga "Orlando" waxaa laga soo toosiyay halkan.Orlando (/ændoʊ/) waa caasimad ku taala gobolka Florida, ee wadanka Maraykanka; iyo fadhiga dowladad Degmada Orange.
Caasimada Orlando waxay dhacdaa badhtamaha gobolka Florida taasi oo u suurtogelisay ineey noqoto meel aad u bulsho badan. Sida lagu sheegay tirokoob dowlada dhexe Maraykanku sameeysay sanadkii 2010ka waxaa deegaanka Orlando Metropolitan ku dhaqnaa shacab tiradoodu dhan tahay 2,134,411 qof; taasi oo ka dhigeysa deegaanka 26aad ee ugu dadka badan wadanka Maraykanka, mida lixaad ee ugu weyn Koonfurta Maraykanka, iyo caasimada 77aad ee ugu balaadhan wadanka, iyo tan shanaad ee ugu weyn gobolka Florida iyo caasimada ugu weyn ee ka fog xeebaha gobolka Florida.
Caasimada Orlando waxaa lagu naaneysaa "Caasimada Quruxda" waxaana astaan u ah Harta Eola. Sidoo kale waxaa lagu magacaabaa "Caasimada Beeraha Damaashaadka Caalamka", waxaana sanadkii 2014ka oo kali ah soo siyaartey tiro dalxiisayaal ah oo gaadhaya 62 milyan.Gegada diyaaradaha Caalamiga Orlando (MCO) waa midka sadexiyotobanaad ee ugu mashquulka badan wadanka Maraykanka iyo midka sagaal-iyo-labaatanaad ee ugu shaqada badan caalamka.Sanadkii 2009 caasimada Orlando waxay noqotey magaalada ugu dalxiiska badan wadanka Maraykanka, taasi oo u noqotey lafdhabar dhaqaalaha koraya ee deegaanka. Meelaha aadka u soo jiitay indhaha dalxiisayaasha waxaa ka mid ah shaneemooyinka Walt Disney World Resort taasi oo leh deegaan balaadhan oo ku dhexyaala farasmagaalka Orlando. Jaamacada Orlando Resort oo la furay sanadkii 1999kii ayaa iyadna ka mid ah soo jiidashada dalxiiska.
Guud ahaan, si la mid ah dhamaan caasimadaha wadanka Maraykanka caasimada Orlando waxay aad u kortay badhtamihii qarnigii labaatanaad (qiyaastii 1980kii), wakhtigaasi oo la horumariyey goobaha waxbarashada, ganacsiga, wadooyinka tareenka iyo adeega bulshada.
Sanadkii 2010ka waxaa caasimada Orlando loo aqoonsaday ineey tahay "Caasimad Caalami" ah. Orlando waxaa lagu daraa afarta caasimadood ee ugu caansan Caasimadaha Maraykanka, taasi oo lagu saleeynayo nolosha dadka, dhaqaalaha iyo adeega bulshada ee dowlada deegaanka. Sidaasi waxaa lagu ogaaday cilmibaadhis ay sameeyeen urur madax banaan oo la yidhaahdo "Ururka Cilmibaadhista Bulshooyinka".
Kani waa maqaal ku saabsan caasimada Philadelphia, Pennysvalia ee dalka Maraykanka. Filadelfiya, Philadelphia (/ləˈdɛlfiə/) waa caasimada ugu weyn ee gobolka Pennsylvania, Maraykanka, iyo magaalada 5aad ee ugu bulshada badan leh wadnkaasi.
Gobolada Waqooyibari ee Maraykanka, gaar ahaan deegaanda u dhexeeya Webiga Delaware iyo Webiga Shuylkill, caasimada Filadefiya waa hogaanka koowaad ee dhaqaalaha iyo dhaqanka deegaanadaasi. Tiro koob dowladu samaysay sanadikii 2014ka ayaa lagu ogaaday in caasimada Filadelfiya leedahay shacab dhan 1,560,297 taasi oo ka dhigeysa mid ka mid ah caasimadaha ugu shacabka badan wadanka Maraykanka.Sanadkii 1682 ayaa nin la odhan jirey William Penn aasaasay caasiamad gobolka Bensykfaniya, taasi oo wakhtigaasi ahayd meel uu maamulo nidaamkii Boqortooyada Ingiriiska.
Si kastaba aha ahaatee, caasimada Filadelfiya waxay qeyb libaax ka soo qaadatey "Kacaankii Maraykanka", waxayna ahay goobta ay ku kulmi jireen hogaamiyayaashii dhisay wadanka Maraykanka, ayaga oo u saxeexay ku Dhawaaqitaankii Xoriyada iyo Madax-banaanida sanadkii 1776, hadana mar labaad ku saxeeyay qodobada "Dastuurka Wadanka Maraykanka" sanadkii 1787.
Intaasi waxaa dheer, caasimad Filadelfiya waxay ahaan jirtey magaalo-madaxdii ugu horeeysay ee wadanka Maraykanka, mar labaad noqotey magaalo-madax goortii uu socday Dagaalkii Sokeeye ee Maraykanka, iyo goortii dhismaha Caasimada Washington D.C oo Filadelfiya ahayd xarunta dowlada ee kus ii meelgaadhka ah.
Horaantii qarnigii 19aad, Filadelfiya waxay noqotey xarun horumar oo leh wershado aad u badan, waxayna yeelatay wadooyin tareen oo ku xidha caasimadaha kale ee wadanka, taasi oo suurtogelisay dhoofinta iyo u iibgeynta alaabo faro badan oo lagu sameyo deegaanda Filadelfiya.
Wakhtiyadani waxaa magaalad aad ugu soo qaxay qoxooti shaqo-doon ah oo intooda badan ka yimid bariga Yurub. Sidoo kale, wakhtiyadani waxay caasimada Filadelfiya noqotey xarun u soo guureen Dadka Madoow (African American) ee wadanka Maraykanka, kuwaasi oo doorbidayay fursadaha shaqo, waxbarsho iyo xoriyad ee caasimadu lahayd. Waxaa la sheegay in sanadkii 1950kii tirada Dadka Afrikan Ameerikanka ah ee ku dhaqan Filadelfiya iyo nawaaxigeeda kor u dhaafeysay labo milyan.
Guud ahaan, Caasimada Filadelfiya waa xarunta dhaqaalha iyo dhaqdhaqaaqa ee gobolka Pennsylvania, waana hooyga todobo ka mid ah Shirkadaha Fortune 1000. Dhismayaasha dhaadheer ee badhtamaha iyo nawaaxiga caasiamada ayaa ah kuwo aad u sii badanaya, waxaanay magaaladani leedahay qaar ka mid ah dhismayaasha ugu dhaadheer wadanka Maraykanka iyo dunida.
Caasimadani waxay caan ku tahay hidaha iyo dhaqanka, taariikhda, dalxiiska (ayadoo la sheegay iney soo siyaartaan dad ka badan 39 milyan sanadkii 2013ka). beerta raaxada iyo dalxiiska Fairmount Park waa deegaanka ugu balaadhan aduunka ee ku dhexyaala magaalo. Sidoo kale waxay caasimadu leedhay 67 meelood oo taariikhi ah, kuwasi oo Filadelfiya ka dhigay meesha koowaad ee ugu dalxiiska badan wadanka Maraykanka gudahisa, isla markaana ka hesha tiro lacag ah oo dhan $10 bilyan dollarka Maraykanka.
Philadelphia waa meesha lagu aasaasay ee hooyga u ah Ciidamada Milatariga Bada loo yaqaano United States Marine Corps, sidoo kale waa xaruntii ugu horeeysay waxyaabo badan ooy ka mid yihiin librarygii ugu horeeyay (la dhisey 1731), Cusbitaalkii ugu horeeyay (la dhisey 1751) iyo midii ugu horeeysay ee laga furo dugsi caafimaad (sanadkii 1765), magaalo-madaxdii kowaad (laga dhigey 1777), meeshii koowaad ee laga furo Sarifka lacagaha Filadelfiya (1790), iyo tii ugu horeeysay Beerta Xayawaanka (zoo) (1874), iyo dugsigii ganacsiga ee ugu horeeyay wadanka (la furey 1881).
Kani waa maqaal ku saabsan caasimada Fiiniks, Arizona ee dalka Maraykanka.Fiiniks, Phoenix (/nɪks/) waa magaalo-madaxda, iyo caasimada ugu weyn gobolka Arizona ee wadanka Maraykanka. Fiiniks waxay leedahay bulsho dhan 1,445,632 (sida lagu ogaaday tirokoob dowladu qaaday sanadkii 2010ka). Caasimada Fiiniks waa magaalo-madaxda ugu shacabka badan dhamaan caasimadaha wadanka Maraykanka. Sidoo kale waa magaalad 6aad ee ugu dadka badan tirada deegaanada wadanka.
Waxaa intaas dheer, caasimada Fiiniks waa saldhiga Phoenix Metropoitan Area, oo sidoo kale lagu magacaabo "Dooxada Qoraxda", midaasi oo iyadna ka tirsan Dooxada Webiga Salt. Marka laga hadlayo Phoenix iyo degaanda hoos yimaada waa mida 13aad ee ugu shacabka badan wadanka Maraykanka, taasi oo leh bulsho dhan 4.3 milyan dad ah (sida lagu ogaaday tirokoobtii sanadkii 2010ka).
Caasimada Fiiniks waxaa intaas u dheer ineey tahay fadhiga dowlada Degmada Marikoba, iyo mid ka mid ah deegaanda ugu baxada balaadhan wadanka Maraykanka.
Magaalada waxaa markii ugu horeeysay soo degay sanadkii 1867 dad beeroleey ah, kuwaasi oo soo jiiteen webiga Salt, webiga Gila iyo dooxaha dhaca agagaarka magaalada Fiiniks. Waxaa magaalo rasmi ah loogu dhawaaqay sanadkii 1881.Caasimada Fiiniks waxay dhacdaa waqooyibari Lamadegaanka Sonoran, kaasi oo leh cimilo qalalan oo la mid ah tan deegaanada ka baxsan dhul-badhaha. Iyadoo taasi jirta ayaa hadana waxaa deegaanka Fiiniks leeyahay nidaamyo beero waaweyn oo soo saara khudaar, cudbi, suuf iyo midho badan ooy kuba tiirsan tahay magaalada Fiiniks iyo nawaaxigeedu.Dagaalkii Labaad ee Aduunka wixii ka horeeyay dhaqaalaha magaaldan Fiiniks wuxuu aad ugu tiirsanaa beerida iyo soosaarida cudbiga, lo'da, Naxaasta iyo khudaarta, taasi oo taagertay bulshada gobolka tan iyo aasaaskii caasimada.
Xoghaye (Af-Ingiriis: secretary; Af-Carabi: أمانة (منصب)) waa qof shaqadiisu tahay caawinta xafiis maamul, sida xafiis dowlo, golle, wasaarad, shirkad iyo wixii la mid ah.
Qofka noqonaya xoghayntu waa mid aqoon iyo xirfad fiican u leh maamulka, isgaadhsiinta, wax xafidida iyo noocyo kale oo aqoon ah.